Al-Shabaab oo sheegatay masuuliyada dilka agaasimihii madaxtooyada Boosaaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandAl-Shabaab oo sheegatay masuuliyada dilka agaasimihii madaxtooyada Boosaaso
December 21, 2016 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
Dilka Aadan Gaas Huruuse ayaa kamid ah dilal is-xig xiga oo masuuliyiin sare loogu geystay gudaha Puntland intii lagu guda jirey sanadadii u dambeeyay. [Xuquuqda Sawirka: Al Jazeera]
Garoowe-(Puntland Mirror) Kooxda hubaysan ee Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada dilkii agaasimaha madaxtooyada Boosaaso ee Puntland.
Aadan Gaas Huruuse ayaa xalay oo Talaado ahayd lagu dilay irida hore ee huteel Huruuse ee magaalo xeebeedka Boosaaso ee gobolka Bari, sida ay sheegeen dadka goobjoogayaasha ahaa.
Afhayeenka howlgalada milatariga u qaabilsan kooxda Al-Shabaab, Cabdicasiis Abu Muscab ayaa wakaalada wararka Reuters u sheegay in ay iyagu dileen sargaalka.
“Caawa waxaanu dilnay agaasimaha madaxtooyada Boosaaso.” Sidaa ayuu Abu Muscab u sheegay Reuters.
Aadan Gaas oo ku jirey da’da, 60-ka, ayaa agaasime ka ahaa madaxtooyada Puntland ee Boosaaso tan iyo 2002-dii.
Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa uga tacsiyeeyay qoyskii agaasimaha, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay xafiiska madaxweynaha.
December 21, 2016 Al-Shabab claims responsibility for killing of director in Bosaso’s presidential palace
November 17, 2016 Al-Shabaab: ‘wax walba oo duula waa cadow’
December 20, 2016 Director of Puntland’s Bosaso presidency shot dead in Bosaso
UK oo u codaysay in ay ka baxaan Midowga Yurub
London-(Puntland Mirror) Dadka boqortooyada Midowday (UK) ayaa ayaa u codeeyay in ay ka baxaan Midowga Yurub kadib afti dadweyne oo taariikhi ah oo dalkaas ka dhacday. Gudaha dalka Ingiriiska gobolka walba oo ka baxsan caasimada [...]
Shirkada Amal Group oo soo kordhisay shirkad isgaarsiineed
Garoowe-(Puntland Mirror) Shirkada Amal Group ayaa xalay oo Axad ahayd kusoo bandhigtay magaalada Garoowe shirkad isgaarsiineed oo cusub oo ay hirgalisay oo lagu magacaabo Amtel. Munaasabada soo bandhigida ayaa waxaa kasoo qaybgalay bulshada qaybaheeda kala [...]